Leonardo Bonucci oo gool dhaliyay kaddib 234 maalmood + Sawirro – Gool FM
Leonardo Bonucci oo gool dhaliyay kaddib 234 maalmood + Sawirro
Raage January 6, 2018
(Milano) 06 Jannaayo 2018 – Daafaca AC Milan ee Leonardo Bonucci ayaa dib ugusoo laabtay gooldhalinta isagoo ahaa dhaliyaha goolka madiga ah ee ay galabta uga badiyeen kooxda Crotone, ciyaar ay inta badan gacanta ku hayeen.
Kabtanka cusub ee Milan oo xagaagan uun kasoo wareegey kooxda Juve ayaa dhaliyay goolkiisii 1-aad ee kooxda Milan, balse wuxuu daafaca reer Viterbese uu goolkaa dhaliyay 234 maalmood kaddib.
“Waxaan bixinnay jawaab kulligeen, kuweenna cusub kaliya maaha. Bilihii hore hadda waa na moodeen, waa inaannu horay eegnaa oo aannu gelinka 2-aad ee horyaalka dadaalnaa, khaladaad badan baannu galnay, waana kasoo rayn karnaa”. ayuu yiri Bonucci ciyaarta kaddib.
Goolkiisii ugu dambeeyay wuxuu dhaliyay 17-ka Maajo sanadkii hore, wuxuuna ka dhaliyey final-ka Coppa Italia oo ay 2-0 uga qaadeen SS Lazio. Waa 234 maalmood.
Arsenal oo ku dhaw dhamaystirka saxiixa daafac ka ciyaara Premier League
GOOGOOSKA: Cagliari vs Juventus 0-1 (Bernardeschi oo Bianconeri u sad buriyay)